Shiinaha Banaanka roobka qurxoon ee roobka loogu talagalay carruurta USD1.1-USD1.8 Soo-saare iyo Badeecad | Weligaaba
Roobkan xiisaha badan ee poncho waxaa loogu talagalay carruurta, wuxuu leeyahay qaab quruxsan iyo midab dhalaalaya, wuxuu umuuqdaa mid aad u xiiso badan oo qurux badan. Waxay ka samaysan tahay PVC tayo sare leh, waa mid dhaqaale laakiin aan biyuhu lahayn, waaraya oo la qaadan karo. Way mudan tahay in la iibsado.
Ka samaysan waxyaabo tayo sare leh oo PVC ah, maqaarka u roon oo aan fududayn in la kala qaybiyo, xidho adkaysi iyo adkeysi isticmaal.
Khafiif ah oo la qaadi karo, ayaa loo laalaabi karaa cabir yar.
Naqshadeynta kartoon qurux badan oo leh midab dhalaalaya, ilmahaaga ka dhig mid aad u qurux badan.
Magaca badeecada Carruurta PVC qalooca poncho
Midab Yello, Casaan, cagaar ama la habeeyay
Astaanta Logo daabacaadda kartoo aqbal
Nooca Koodhadhka guud ee roobka
Cabir 82 * 56cm ama codsi gaar ah
Xirxirida 1 kumbiyuutarro / boorso opp, 50pcs / kartoon
Waqti Sample ah 7-10 maalmood
Hore: Carruurta Roob-joogga leh Hood USD1.1-USD2.3
Xiga: Qalooca Polyester Rain poncho leh dabool USD5.3-USD9.9
1.Q: Halkee ku taal shirkaddaadu? Ma booqan karaa halkan?
J: Warshaddeenu waxay ku taal Shijiazhuang City, gobolka Hebei, Shiinaha. Ku soo dhowow inaad na soo booqato.
2.Q: Waa maxay MOQ?
A: MOQ waa 2000pcs / midab. Haddii midab la heli karo, MOQ yar ayaa sidoo kale la aqbali karaa.
3.Q: Ma weydiin karaa hal muunad ka hor inta aan la dalban?
J: Haa, waxaan kuu soo diri karnaa muunad bilaash ah, laakiin macaamilku wuxuu ubaahan yahay lacag bixinta khidmada ah ee saamiga, sida DHL, TNT, FEDEX, UPS iwm
4.Q: Ma sameyn kartaa astaan ​​gaar ah?
J: Haa, waanu sameyn karnaa astaan ​​gaar ah oo aan raacno farshaxankaaga.
5.Q: Sidee ku saabsan qiimaha?
J: Waxaan soo saareynay oo aan dhoofin jirnay ilaa iyo shan iyo toban sano; Waxaan leenahay wax aad u fara badan oo qiimahoodu waa tartan. Kala duwanaanta qiimaha waa laga bilaabo 0.12usd ilaa 15usd / gogo 'iyadoo loo eegayo waxyaabo iyo naqshad kala duwan.
6.Q: Waa maxay lacagtaadu? Sideen kuu bixin karnaa adiga?
J: Waan aqbali karnaa T / T, L / C, Western Union, Escrow bixinta, haddii aad qabtid shuruudo kale oo lacag bixin ah, fadlan farriin noogu reeb inaad nala soo xiriirto.
7.Q: Sidee ku saabsan midabka?
J: Midabada caadiga ah ee alaabada la dooranayo waa Casaan, Jaale, Buluug, Casaan iyo Transparent color Midabka Pantone waa la dooran karaa haddii tirada ay gaarto MOQ.
8.Q: Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada?
J: Caadi ahaan waxaan diyaarin karnaa inaan wax ku gaarsiino 25-35 maalmood gudahood. Waxay sidoo kale kuxirantahay tirada.
9.Q: Ma haysaa wax shahaado ah oo ku saabsan alaabooyinka aad hadda qabanayso?
J: Tijaabo badan ayaanu ku samaynay badeecooyinka aanu iibinayno imika. Sida SGS, BV, REACH, Kaliforniya 65. Tijaabinta lacag la’aanta ah ee 6P iyo wixii la mid ah. Annaguna waxaan samayn karnaa dharka sida ku xusan codsiyadaada, muunadda wax soo saarka ayaa loo diri karaa tijaabinta ka hor rarka.
PCV Hooded Roob Poncho
Ugaadhsiga PVC Ugaarsiga
Koodhka Roobka PCV
PCV Roob Poncho
Koodhadhka Xaragada ee la qaadan karo ee loo yaqaan 'PE'
Custom biyuhu Neefsan kara Unisex Roob Poncho ...
Coco-rooga Balaastik ah oo Cimilo ahaan u Wanaagsan Deegaanka
Carruurta Pu Raincoat, Peva Raincoat, PCV Poncho, PCC Raincoat, Haweenka Koodhka Roobka, Pu Raincoat,